Ịmụ ihe na nwatakịrị ka ịnya ịnyịnya ígwè
Ụmụaka Psychology na mmepe
Ugbu a, ịnyịnya ígwè ahụ na-ewu ewu n'ụwa nile. Nke mbụ, ọ bụ njem eji eme njem na gburugburu ebe obibi, na nke abụọ, ọ na-enyere aka idozi nsogbu nke mgbochi okporo ụzọ na obodo. N'ọtụtụ obodo Europe, nke a bụ ụzọ kachasị mkpa njem.
Otú ọ dị, ịhụ n'anya ịnya ịnyịnya ígwè, ọbụna ime ogologo njem ọ pụtaghị na ị ghaghị ịbanye na ịgba ígwè. Iji nwee ike ịnya ịnyịnya ígwè, ọ dị mkpa ka ị dị mma.
Ụmụaka ndị dị n'okpuru afọ 8 anaghị atụ aro ka ha tinye aka na ịgba ígwè. Mbibi nke ịgba ígwè na-eduga n'ọganihu dị ukwuu nke olu nke uru ahụ na ụkwụ iji merụọ mmepe akụkụ ndị ọzọ nke ahụ.
A naghị anabata ịgba ọsọ ndụ na ihe ụfọdụ dị iche iche na mmepe nke ọkpụkpụ. Tụkwasị na nke a, adịghị igwe igwe, ma ọ bụrụ na nwatakịrị nwere nsogbu na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na nhazi nke mmegharị.
Otú ọ dị, nke a apụtaghị na a ga-ahapụrịrị ịnyịnya ígwè kpamkpam. Ọ bara uru maka mmepe nke uru na nkwonkwo. O siri ike iche n'echiche nwatakịrị na-amaghị otú e si agba ịnyịnya ígwè.
Kedu afọ ole ị na-etinye nwa gị n'ụgbọala ?
Na tricycle ọ ga-ekwe omume ịkụnye nwatakịrị ọ bụla ọ bụla. Ọ bụrụ na nwa gị onwe ya na-abanye na pedals ma nwee ike iji ya - nye ya ohere ahụ.
Ụgbọ ịnyịnya atọ nwere ụkwụ nwere otu ihe na-adịghị mma. Mgbe nwatakịrị ahụ na-agba ọsọ, ọ na-eme ka ọkpụkpụ na-agba ụkwụ, ya mere, ụkwụ ahụ, ígwè ahụ nwere ike ịdaba ngwa ngwa. Jide n'aka igosi nwatakiri a onye okachamara n'ile "Otu esi eme nke oma na-agba ugbua ka o ghara ida."
Kedu mgbe ị ga-esi gbadaa nwatakịrị site n'ụgbọ ụkwụ atọ gaa n'ụgbọ ịnyịnya abụọ ma ọ bụ mgbe ọ ga-ewepụ ndị ụkwụ ọzọ? Enweghị mgbochi afọ. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume itinye nwatakịrị n'ụdị ịnyịnya ígwè ahụ nanị n'ihi na e mechaala ya. Ya mere, emela nke a ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ, dịka ọmụmaatụ, nwere ụkwụ na-adịghị ike ma ọ bụ ịhazi nkwekọrịta. Ọ bụrụ na ị nwere nwatakịrị na-arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ na-awụli elu n'ụzọ dị ịtụnanya, na-ejide onwe ya, mgbe ahụ, mgbe ọ dị afọ anọ, ọ ga-enwe obi ụtọ ịgbanwere ịnyịnya ígwè abụọ. Buru n'uche, karịa arọ nke nwatakịrị ahụ dị ntakịrị, n'ihi ya, ọ dịịrị ya mfe ịnọdụ n'elu ịnyịnya ígwè dị otú ahụ.
Tụkwasị na nke a, ị pụghị iburu nwa ahụ ma tinye ya n'ụgbọ abụọ ma ọ bụ anọ. Tupu nke a, kụziere ya ụzọ ziri ezi. Olee otú? Naanị egbochila nwa ahụ ka ọ "na-efe efe" site na nwata, mgbe ọ na-eme mgbalị mbụ ya na-eje ije. Mee ya ntakịrị mgbe ọ dị sentimita abụọ site na ite ahụ. Nature nyere ya usoro kachasị mma nke nchedo site na mmerụ: ọ bụrụ na ihe dị njọ, nwata ahụ na-anọdụ n'elu ịnyịnya ibu ozugbo ahụ. Kụziere ya ka ọ ghara igosipụta aka ya. Ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ n'ihu ya, ọ ga-ehulata ma daa na ikpere ya. Kụzie ihe ndị ahụ iji mee ka ọkpụkpụ na-aga n'ihu, azụ na n'akụkụ. Ịnwere ike ọbụna igwu "na footboard", mana naanị hụ nlele na ịkpachara anya. Nwatakịrị kwesịrị ịdị njikere maka ọdịda a na-atụghị anya ya. Nke a ga - enyere aka izere mmerụ n'ọdịnihu.
Gaa maka ya!
Nke mbụ, mee ka elu oche ahụ guzosie ike: na ala nke ụkwụ ahụ, ụkwụ kwesịrị ịbịaru ya kpamkpam, na n'elu - adịghị emetụ stere ụkwụ ahụ. Jide n'aka na nwata ahụ na-etinye ụkwụ ya na ụkwụ ya dum - ọ bụghị ụkwụ, ọ bụghị ikiri ụkwụ, na ikuku.
Na-esote, gbanwee ịdị elu nke ikpu ígwè. Nwatakịrị kwesịrị inwe ahụ iru ala mgbe ọ na-agbatị ogwe aka ya na-agbatị, ọbụna n'otu oge. Ndagharị ụgbọ ụkwụ agaghị eguzo n'otu akụkụ nke ogo 90. Okwu a dị ezigbo mkpa, ebe ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe ọghọm (ịda n'ụda nwa ma ọ bụ na-akụda ihe mgbochi) njiri nke ọkpụkpụ ahụ dị n'ogo n'afọ, enwere ike inwe mmerụ dị njọ.
Ụfọdụ ndị nne na nna nwere igwe elekere anọ na-ebuwanye elu. Nke a adịghị mma ime. Nwa ahụ ga-adabere na aka nri ma ọ bụ aka ekpe, ya mere ịnyịnya ígwè ahụ ga-esi n'otu akụkụ ruo n'akụkụ. Nke a anaghị eme ka ọ kwụsie ike. Tụkwasị na nke ahụ, nwatakịrị ahụ agaghị enwe ike ịmalite ịkwọ ụgbọala na-agba ọsọ ngwa ngwa n'enweghị mpi ọzọ. Nke a dị oke ize ndụ karịa nanị iwepụ "ihe nchekwa".
Ụmụ tozuru etozu na-azụta helmets ígwè, nke na-eme ka ihe mberede mee ka isi ghara ịdaba.
Tupu ịtọhapụ nwatakịrị ahụ ịnya ịnyịnya ígwè site n'ugwu, na-agagharị n'okporo ụzọ ma na-ahapụkarị mpaghara nke visibiliti - mee ya, dozie ọtụtụ ule nyocha. Chọta ugwu ebe o nwere ike ịbanye n'ime oghere na ngwa ngwa. Kwe ka onye na-eto eto na-agba chaa chaa na-eme asatọ na ọkwa. Ka ya rigoro "agwo", site "onu".
Ihe kachasị njọ nke nwere ike ichere maka obere ndị na-agba ígwè bụ ụzọ. A machibidoro ụmụ ha iwu ka ha gaa ebe ọ dịkarịa ala ụfọdụ ụdị okporo ụzọ. Chọta ebe enweghi ugbua - pavement, ebe nwuru anwu n'etiti ulo ma o bu ulo egwuregwu.
Kemgbe nwata, na-eme ka nwata ahụ debe iwu. Ọ bụrụ na ị nọ na nwata, gbasoo iwu, ọbụlagodi na enweghi ụgbọala n'okporo ámá. Ikwenye na iwu ndị ahụ ga-eme ka gị na nwa gị nweta nkasi obi na oke nchekwa.
Kedu ka m nwere ike isi kụziere nwatakịrị otú e si egwu mmiri?
Kụzie onye mmeri
Kedu ọkwa ị ga-ahọrọ maka nwata?
Gịnị ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-apịa ma na-ata?
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ akwụsị ige ntị
Ngwá ụmụaka ịkụzi ihe egwu site na afọ 2
Atụmatụ ịzụ ụmụ
Olga Buzova rịọrọ ndị debanyere aha maka ndụmọdụ
Umu akwukwo nri sitere akwukwo Ezi ntụziaka Dr.Oetker
Egwu na anụ ndị e tinyere na osikapa
Kedu ụdị uwe a na-apụghị ịhọrọ maka onye akaebe ahụ?
Nri: nsogbu ma ọ bụ uru?
Canape site na yabasị na caviar
Age Age na otu akwa
Kedu ihe na-akpali ndị nnọchiteanya nwoke niile?
Enweghi umuaka nwanyi
Otu esi eme "gị" ohere ọ bụla
Nchịkọta anụ ọhịa nke Italian pasta
Ngwọrọgwu ndi mmadu maka uzo di nfe: mkpuru ahihia maka idi ocha
Esi kwadebe ụlọ, ụlọ maka Afọ Ọhụrụ 2013
Mimosa salad - uzommebe kpochapu na nri nri azu, salmon salmon, sardines, osikapa na chiiz - nzobe ihe omuma na uzo
Mbadamba ihe a na-eme n'ụlọ
Fans nke duet Garik Kharlamov na Timur Batrutdinov kwara Olga Buzovoy, foto
Ndị ọkàiwu ezinụlọ: mkpughe gbasara ịgba alụkwaghịm
Osisi n'ime ụlọ: nephrolepis